Uqophe umlando ngokuhamba ibanga elide ngeBMW i3 kagesi
ISIKHULU sakwaBMW Group South Africa uTim Abbott sihalalisela uShaun Maidment ngokuhamba ibanga elide e-Afrika nge-i3
INTATHELI YEZEZIMOTO | May 24, 2019
UQOPHE umlando uShaun Maidment ngokuthi imoto yakhe iBMW i3 kagesi iba ngesihambe kakhulu e-Afrika.
UMaidment uhamba nge 60Ah okuyiBMW i3 eyaba phakathi kwezokuqala ukwakhiwa ayithenga ngo-Agasti 2016.
Imoto yakhe, engeka-15 ukuhamba ibanga elikhulu emhlabeni jikelele, usehambe ngayo ibanga eliwu-200 000km .
Usebenzisa yona nsukuzonke uma ehamba amabanga amade namafushane.
“Le moto iyishintshile impilo yami,” kusho uMaidment.
Uthe wayesaba ekuqaleni kodwa bekunezinsuku lapho ayehamba khona ibanga eliphakathi kuka-200 kuya ku-300km ngosuku.
Isikhulu sakwaBMW Group South Africa, uTim Abbott, uhalalisele uMaidment wathi lokhu kukhombisa ukuthi ungaya noma yikuphi nge-i3.
I-i3 yokuqala eyethulwa ngo-2014 yayikwazi ukuhamba u-130km ngogesi kwathi ibhethri entsha eyafika ngo-2016 yayilulela ibanga layenza yakwazi ukuhamba u-200km. Eyanziwe emuva kwaleyo isiyenza ihambe ibanga elingaphezu kuka-260km.
Ukwethulwa kwebhethri entsha kuhambisane nokwethulwa kwe-i3 ethintiwe emzimbeni esinama adaptive LED headlights ane matrix function.
ENingizimu Afrika kusukela ngo-2015 sekudayiswe izimoto ezingaphezu kuka-600 okuyi-i3 ne-i8. Emhlabeni jikelele ngo-2017 kudayiswe ama-i3 nama-i8 kagesi angaphezu kuka-100 000. Ngonyaka odlule kwadayiswa angaphezu kuka-140 000. KwaBMW bathe bazimisele ngokuletha izimoto zikagesi eNingizimu Afrika.
Okwamanje banezikhungo eziwu-58 zokushaja. Eziyisithupha zaso bazisebenzisa nabakwaNissan. Kunamagaraji ayisihlanu ashaja ngokushesha - iZambezi Auto neClub Motors Fountain ePitoli, eSandton Auto eGoli, Supertech eThekwini naseSMG eKapa. Kuthiwa ukwazi ukushaja i-i3 isuka ku-0% iye ku-80% ngemizuzwana ewu-45.